.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Fotosizer portable
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတုို့အတွက် wallpaper ပုံလေးတွေ တင်ပေးဖို့လုပ်နေရင်းက ပုံတွေက
ဆိုက်ပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပုံတွေကိုတစ်ပြိုင်ထဲ ဆိုဒ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
ဆိုဒ်ကလည်းမကြီးပါဘူး။ အသုံးလိုတယ်ဆိုရင်အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
Posted by FlashSongCrazy at 10:38